केही समयअघि बलिउड अभिनेता कादर खानको मृत्यु भयो । क्यानडाको अस्पतालमा उपचाररत उनको ८१ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
तीन, चार महिनादेखि अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई सास लिनमा कठिनाई थियो । जसले गर्दा उनलाई भेन्टिलेटरबाट हटाएर भीआईपीएपी भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । तर, यो रोगले उनलाई भर्खरै मात्र सताएको होइन । वर्षौ अघि एउटा रोगबाट ग्रसित थिए, जसले शरीरको विभिन्न भागहरुमा असर पुर्‍याउँदै आएको थियो ।
यसलाई प्रोग्रसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पिएसपी)भनिन्छ ।
नेशनल हेल्थ सर्भिस, व्रिटेनका अनुसार प्रोग्रसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी -पिएसपी) भनेको एक दुर्लभ स्थिति हो जसमा मानिसको सन्तुलन, हिँडडुल गर्न, बोल्न तथा निल्नमा कठिनाई हुने गर्छ । यसकै कारण मस्तिष्कको कोशिकामा पनि असर पुग्ने गर्छ । ६० वर्ष उमेर पार गरेका मानिसहरुमा यो समस्या बढी देखिने गर्छ ।
के कारणले हुन्छ पिएसपी ?
‘तउ’ नामक प्रोटिनको बनावटका कारण दिमागको कुनै भागको ब्रेन खराब भएमा प्रोग्रसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी -पिएसपी) हुने गर्छ । तउ मस्तिष्कमा हुन्छ र उच्च स्तरसम्म पुग्नु अगावै यो टुक्रिएर विग्रने गर्छ ।
पिएसपीबाट ग्रसित व्यक्तिहरुमा भने यो सही तरीकाले टुक्रदैन । जसका कारण मस्तिष्कमा यसको झुप्पा बन्ने गर्छ । यो झुप्पा अलग अलग आकार तथा संख्यामा हुनेगर्छ । साथै, यो मस्तिष्कको विभिन्न भागमा हुनसक्छ । सले गर्दा यसको लक्षण पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुने गर्छ ।
कस्ता हुन्छन् लक्षण ?
यसको लक्षण समय अनुसार बढ्नुका साथै गम्भीर हुने गर्छ । सुरुवाती चरणमा यसको लक्षण अन्य रोग झै हुने भएकोले यो रोग पत्ता लगाउन मुश्किल हुनसक्छ । यद्यपी, यी लक्षण देखा परेमा पिएसपी भएको हुनसक्छ ः
-शरीरको सन्तुलन कायम राख्न तथा हिँड्न-डुल्नमा कठिनाई
-लड्छु की भन्ने डर लागिरहने
-व्यवहारमा परिवर्तन आउने
-आँखाको चालमा नियन्त्रण नरहने
-स्मरणशक्ति हराउँदै जाने
कसरी पत्ता लगाउने रोग ?
यो रोगको कुनै परीक्षण नहुनु नै यसको सबैभन्दा ठूलो जटिलता हो । परीक्षण नहुने भएकै कारण यो रोग पुष्टि हुँदैन । रोगको लक्षणका आधारमा मात्र यो रोग पत्ता लाग्ने गर्दछ । त्यस्तै , यसको लक्षण पार्किन्सन्ससित मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले पनि चिकित्सकहरुलाई यो रोग पत्ता लगाउन समय लाग्ने गर्छ । कतपय अवस्थामा मस्तिष्कको स्क्यान गरेर मात्र रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसैले, यो रोग लागेको शंका लागेमा न्युरोलाजिस्टको सहायता लिन सकिन्छ ।
अहिलेसम्म प्रोग्रसिभ सुपरन्युक्लियर पाल्सीको कुनै उपचार फेला परेको छैन । तर यसबारे विभिन्न अनुसन्धान पनि भईरहेको छ । जसले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् र, समस्या गम्भीर हुनबाट जोगियोस् । यद्यपी, यसको उपचार पनि अलग अलग हुने गर्छ ।
यो समस्या देखिएमा के गर्ने ?
-शरीरमा सन्तुलन कायम राख्न नियमित औषधी सेवन गर्ने ।
-हिड्न-डुल्न तथा काम गर्नमा सजिलो होस् भन्नका लागि फिजियोथेरापिस्टको मद्दत लिन सकिन्छ ।
-बाल्न तथा निल्नमा सजिलो होस् भन्नका लागि स्पिच थेरापीको मद्दत लिन सकिन्छ ।
-धपेडी नगर्ने, सबै कुरा आरामले गर्न अक्युपेशनल थेरापी लिने ।
-हेर्न सजिलो होस् भन्नका लागि विशेष चश्माको प्रयोग गर्ने ।
-फिडिङ्ग ट्युबको मद्दतले खाना खान सकिन्छ ।
श्रीमान-श्रीमतीबीच अनमेल सेक्सः उपचार के हो ?
सहज र फाइदाजनक ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रिया
यस्तो छ घिउकुमारीका १२ फाइदा
तिहारमा क्यान्डिल लाइटदेखि रंगोलीसम्म कसरी सजाउँदा क्रिएटिभ देखिन्छ ?
सामाजिक सञ्जालको कुलतः लागुऔषध जस्तै भयानक
किवी फलको कथाः कसरी, किन र केका लागि खाने ?
सन्तुलित भोजनले स्वस्थ मुटु
सरकार, चमत्कार र बलात्कार
अबको गन्तब्य असुरक्षित गर्भपतनको अन्त्य
यस्ता छन् स्वाईन फ्लुबाट बच्ने पाँच उपाय
कलिला बालबालिकामा किन हुन्छ उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्या ?